राज्यभवनको मर्मतसम्भार गर्न यहोवाका साक्षीहरू कसरी सघाउँछन्‌?
यहोवाका साक्षीहरूको प्रत्येक राज्यभवनले परमेश्वरको पवित्र नाउँ वहन गर्छ। त्यसकारण राज्यभवनलाई सफा, चिटिक्क राख्न अनि आवश्यक मर्मतकार्यमा भाग लिन पाउनुलाई हामी ठूलो सम्मान र आफूले चढाउने पवित्र सेवाको महत्त्वपूर्ण भाग ठान्छौं। यसमा सबैले भाग लिन सक्छन्‌।
सभापछि सरसफाइ गर्न अग्रसर हुनुहोस्। राज्यभवनलाई सफासुग्घर राख्न हरेक सभापछि भाइबहिनीहरू खुसीसाथ राज्यभवनको हल्का सरसफाइ गर्छन्‌। साथै हप्ताको एक चोटि पूरा सरसफाइ गरिन्छ। सरसफाइ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको सूचीअनुसार मण्डलीका कुनै एक जना एल्डर वा सहायक सेवकले सम्पूर्ण कामको संयोजन गर्छन्‌। आवश्यकताअनुसार राज्यभवनको भित्र र बाहिर सरसफाइ गर्न सबैले भाग लिन्छन्‌। जस्तै: पुछपाछ गर्ने, कुर्सी मिलाउने, शौचालयलाई सफा र कीटाणुमुक्त बनाउने, सिसाहरू सफा गर्ने, फोहोरलाई ठीक ठाउँमा फाल्ने अथवा राज्यभवनको बाहिरपट्टि र वरिपरि सफा गर्ने। राज्यभवनको बृहत्‌ सरसफाइ गर्न कम्तीमा वर्षको एक दिन छुट्टयाइन्छ। आफ्ना छोराछोरीसित सँगै मिलेर सरसफाइमा भाग लिंदा हामीले उनीहरूलाई उपासनास्थलप्रति आदर देखाउन सिकाइरहेका हुन्छौं।—उपदेशक ५:१.
आवश्यक मर्मत गर्न सघाउनुहोस्। राज्यभवनको भित्र-बाहिरको अवस्था कस्तो छ भनेर वर्षको एक चोटि विस्तृत रूपमा निरीक्षण गरिन्छ। यसरी निरीक्षण गरिसकेपछि नियमित रूपमा आवश्यक मर्मतसम्भार गरिन्छ, जसले गर्दा पछि अनावश्यक खर्च बेहोर्नु पर्दैन। (२ इतिहास २४:१३; ३४:१०) आवश्यक मर्मतसम्भार गरेर चिटिक्क राखिएको राज्यभवन परमेश्वरको उपासना गर्नको लागि उपयुक्त ठाउँ हो। हामी यहोवालाई कत्ति प्रेम गर्छौं अनि आफ्नो उपासनास्थललाई कत्ति प्यारो ठान्छौं भनेर राज्यभवनको सरसफाइमा भाग लिएर देखाउँछौं। (भजन १२२:१) अनि यसले टोल-छिमेकमा पनि राम्रो प्रभाव पार्छ।—२ कोरिन्थी ६:३.
हामीले आफ्नो उपासनास्थललाई किन हेलचेक्य्राइँ गर्नु हुँदैन?
राज्यभवनलाई सफा राख्न कस्तो प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ?